Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Milkiilaha Chelsea Oo Go'an Kasoo Saaray Haaland, Jadon Sancho Oo Tijaabada Caafimadka U Maraya Man United Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga: Milkiilaha Chelsea oo go’an kasoo saaray Haaland, Jadon Sancho oo tijaabada Caafimadka u maraya Man United iyo Qodobo kale
Wararka Suuqa kala iibsiga: Milkiilaha Chelsea oo go’an kasoo saaray Haaland, Jadon Sancho oo tijaabada Caafimadka u maraya Man United iyo Qodobo kale
July 1, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Barcelona ayaa u soo bandhigtay Sergi Roberto kooxda Manchester City sida laga soo xigtay Mundo Deportivo ,.
Arsenal ayaa dalab rasmi ah ka gudbisay xiddiga Sassuolo Manuel Locatelli, sida laga soo xigtay madaxa kooxda Serie A Giovanni Carnevali. Goal
Manchester City ayaa qorsheyneysa inay wadahadal la yeelato weeraryahanka reer England Raheem Sterling oo ku saabsan mustaqbalkiisa – 26 jirkaan ayaa labo sano uga hartay qandaraaskiisa kooxda heysata horyaalka Premier League. (Dailymail)
Manchester City ayaa lagu wadaa in lagu wareejiyo 10 milyan oo ginni ($ 13.5m) ka dib markii Jadon Sancho uu ugu biiray deriskiisa United heshiiska Borussia Dortmund iyo Man city ee hore ayaa sidasi dhigaya.
Milkiilaha Chelsea Roman Abramovich ayaa weli kalsooni ku qaba in Blues ay ku guuleysan karto saxiixa weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Braut Haaland, oo 20 sano jir ah xagaagan waxana go’ankiisa uu yahay mid ay kooxda kula soo wareegeyso xidigan reer Norway ah. (Express)
Sancho ayaa loo gacan galin doonaa lambarka 7-aad ee kooxda Man United oo uu haatan xirto weeraryahanka reer Uruguay ee Edinson Cavani, 34. (Metro)
Manchester United ayaa sidoo kale xiiseyneysa Bayern Munich iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Jarmalka Leon Goretzka, oo 26 jir ah, oo qandaraaskiisa kooxda heysata Bundesliga uu dhacayo sannadka 2022. (Bild)
Kylian Mbappe ma doonayo inuu kordhiyo qandaraaskiisa haatan, kaasoo soconaya xilli ciyaareedka 2021-22, sida laga soo xigtay L’Equipe .
Marco Silva ayaa si ku meel gaar ah u ogolaaday inuu bedelo Scott Parker inuu noqdo tababaraha Fulham, The Athletic ayaa werisay.
Agaasimaha guud ee kooxda Inter Giuseppe Marotta ayaa xaqiijiyay in daafaca garabka ka ciyaara ee Achraf Hakimi uu noqon doono laacib ka tirsan PSG 24-ka saac ee soo socota. sida uu u sheegay Sky Italia.
Fiorentina ayaa u magacowday Vincenzo Italiano tababaraha cusub ee kooxda.
Manchester United ayaa heshiis la gaartay Borussia Dortmund oo ku aadan saxiixa Jadon Sancho. Waxaa la fahamsan yahay in lacag ka yar 73 milyan oo ginni ay labada dhinac ku heshiiyeen iyadoo ciyaaryahanka reer England uu haatan qarka u saaran yahay inuu maro tijaabada caafimaadka ka hor inta aan heshiiska la dhameystirin. Goal
Arsenal ayaa heshiis la gaartay Benfica oo ku aadan Nuno Tavares, iyadoo daafaca bidix uu tijaabada caafimaadka u marayo Gunners aduun dhan 7 milyan ginni u dhigmin ($ 9.7m).
Tababarihii hore ee Liverpool Rafa Benitez ayaa loo magacaabay inuu noqdo tababaraha joogtada ah ee kooxda Everton isagoo qalinka ku duugay heshiis seddex sano ah. Everton FC
Goolhayaha Manchester City Gavin Bazunu ayaa qarka u saaran inuu amaah ugu aado kooxda Portsmouth ee League One isagoo raadinaya daqiiqado badan uu ciyaaro, sida ay qortay jariirada Irish Independent .
Agaasimaha isboortiga Paris Saint-Germain Leonardo ayaa la wareegay wadahadalada qandaraaska uu kula joogo Kylian Mbappe – sida laga soo xigtay L’Equipe .
Roma ayaa loo sheegay inay waajib ku tahay inay bixiyaan 13 milyan oo ginni (£ 11m / $ 15m) si ay ula soo saxiixdaan goolhayaha kooxda Wolves Rui Patricio – sida laga soo xigtay BBC Sport .
Bayern Munich ayaa dejisay qiimaha ugu dambeeya ee ay ku dooneyso garabka reer France ee Kingsley Coman – sida laga soo xigtay BILD .